यस्तो छ,निर्मला हत्याको प्रतिवेदन - ९ आश्विन २०७५, NepalTimes
यस्तो छ,निर्मला हत्याको प्रतिवेदन
कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले अनुसन्धान सकी मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
समितिका संयोजक सहसचिव हरि मैनाली सहितको समितिको टोलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारले कञ्चनपुर घटना विवादास्पद बन्दै गएपछि भदौ ७ मा छानबिन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक मैनालीको नेतृत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रहरीको अनुसन्धानमा गल्ती भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही लापरबाही देखिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । प्रहरीले घटनाको मुख्य अभियुक्त बनाएका २४ वर्षीय दिलिपसिंह विष्टको डिएनए परीक्षण नमिलेपछि उनी रिहा भइसकेका छन ।
समितिले अहिलेसम्म गरेको छानबिनमा घटना के भएको थियो? प्रहरीको अनुसन्धान कस्तो देखियो? एसपी विष्टको नेतृत्वले गरेको अनुसन्धानमा के कमजोरी थियो? थप अनुसन्धानको लागि सुझाव लगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धान अनुसार नै गृहमन्त्रालयले तत्कालीन कञ्चनपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्ट, डिएसपी अङ्गुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेती लगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बित गरेको थियो ।